Sida loo Midhadh YouTube Audio Si fudud
> Resource > YouTube > Sida loo Midhadh Audio ka YouTube
YouTube waa gaad ah oo cayn kasta ah oo ay ku jiraan filimada videos, videos music iyo macmal ah videos. Inta aad ka badan soo jiitay in saamaynta muuqaal ah ee YouTube videos, qaar kale waxaa laga yaabaa in ay isha ku dhagaysto qaybta audio, sida waxaa jira laba nooc oo ah Bartayaasha sida muuqaalka iyo audial. Si aad u tuujin casiir ugu audio ka mid ah YouTube videos, Wondershare Streaming taariikhqorihii Audio waa qalab fiican oo caawin. Waxaa soo dhufsan karto audio ka YouTube aan khasaaro tayada galay MP3 files oo si fudud loo wareejin karaa wax kasta oo qalabka la qaadi karo. Waa maxay dheeraad ah, ka dib music waxaa goolka, waxaad samayn kartaa ugu waxaa ka mid ah sida la abuuro ringtones iyo sixiddiisa macluumaadka aasaasiga ah. Waxaanu intaas oo dhammu waxay wada hadli doonaa si faahfaahsan. Marka hore hubi edbinta ah tallaabo-tallaabo in ay la wareegaan YouTube audio hoos ku qoran.
1 Ku rakib YouTube grabber audio
Download this grabber audio adigoo gujinaya Download icon ee kor ku xusan oo ku xidh. Riix Run in la furo barnaamijka marka ay keentay in marka rakibaadda. Laba nooc ayaa diyaar u ah in aad doorato. Waxaan inta badan diirada saarayaa version daaqadaha.
2 cuskato music ka YouTube
Riix badhanka Record weyn ugu horeysay ee si aad u hesho dhamaystiran files audio. Markaa waa inaad aadaa YouTube.com inuu u ciyaaro videos. Marka waxaa sanqadhaya soo socda ka your computer, ka dibna dareen leh this grabber audio waxa lagu ogaan karaa oo aad bilowdo shaqo.
Ka dib markii audio waxaa goolka ka YouTube, waxaad ka heli doontaa iyaga soo bandhigay Maktabadda iyo kaydiyaa gal ah deegaanka. Dooro dhamaan music Maktabadda iyo guji badhanka dar Lugood in. Markaas music ah waxaa laga heli karaa Lugood oo aad u hagaagsan kartaa in iDevices kasta.
Si aad u hesho meesha music waxaa loo kaydiyaa, waxaad u baahan tahay inaad xaq u-riix file maqal ah oo dooro Open ee Folder.
Muuqaalada More malana
Abuuritaanka ringtones: Riix icon dawan ee u dhow music ah, ka dibna bitmap ah ka muuqan doontaa hoose ee aad u dooran qayb ka mid ah iyo badbaadin sida M4R u iPhone iyo MP3 wixii qalab kale oo la qaadi karo.
Macluumaad tafatirka: Tani YouTube grabber audio lagu ogaan karaa macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan heesaha. Laakiin haddii aan, aad astaysto macluumaadka keligaa. Xaq-riix file maqal ah iyo dooran View Detail. Nooca in erayada wax khaanadda saxda ah in arbushin ilaa doona.
Dejinta waqtiga jadwalka: Haddii aad leedahay YouTube files badan oo maqal ah in ay la wareegaan, qabtay wakhti adigoo gujinaya icon saacad ku furmo suuqa hoose ay dhacdo in aad leedahay waxyaabo kale oo muhiim ah in la sameeyo.
Iyada oo hawlaha badan oo kor ku wada hadleen, maxaa diidaya download u leeyihiin isku day ah oo hadda?